Ederede Ajoy Krishnamoorthy na Martech Zone
Edemede site na Ajoy Krishnamoorthy
Ajoy nwere ihe karịrị afọ 15 ahụmahụ na ụlọ ọrụ na teknụzụ, ahịa, na ọrụ ndu. Tupu Acumatica, Ajoy nọ na Microsoft na-anya ahịa azụmaahịa n'ofe ọtụtụ njikwa ngwaahịa na azụmaahịa na nso nso a bụ onye isi maka OEM Segment Marketing ebe ya na ndị otu ya na-ahụ maka atụmatụ ahịa-ahịa gafere azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa. .
Ihe kpatara ndi ahia na ndi ahia gha acho Cloud ERP
Tuesday, October 6, 2020 Monday, October 5, 2020 Ajoy Krishnamoorthy
Ndi n’ire ahia na ndi n’ere ahia bu ihe ndi n’eme ka inweta kompeni na enweta ugwo. Ngalaba ahia na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwalite azụmahịa ahụ, ịkọwapụta onyinye ya, na ịtọlite ​​ndị iche ya. Ire ahia na - eweputa mmasi na ngwa ahia ma meputa ndu ma obu olile anya. Na egwu egwu, ndị otu ahịa na-elekwasị anya n'ịtụgharị atụmanya ịkwụ ndị ahịa ụgwọ. Ọrụ ndị ahụ nwere njikọ chiri anya ma dị oke mkpa maka ọganiihu azụmaahịa niile. Nyere mmetụta ahịa na ahịa nwere na